धिक्कार छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई | मझेरी डट कम
gita thapa — Sun, 01/13/2013 - 20:23
एक दिन घुम्दै घुम्दै बजार गए कालीदास । उनका नजर एक महिलामाथि परे । त्यो महिलासँग एउटा माटाको घैटो र नजिकै एउटा गिलास थियो । कालीदासले महिलालाई सोधे, “तिमी के बेच्दैछ्यौ ?”
महिलाले जवाफ दिई, “महाराज ! म पाप बेच्दै छु ।”
कालीदास ले आश्चर्यचकित हुँदै सोधे, “पाप, यो माटोको भाँडोमा ?”
महिलाले भनी, “हो महाराज ! यो माटोको भाँडोमा पाप छ ।”
कालीदास - “कस्तो-खालको पाप छ ?”
महिला - “यो माटोको भाँडोमा आठ वटा पापहरू छन् । म चिच्याई चिच्याई भन्छु, म पाप बेच्छु । तर पनि मान्छेहरू यो पाप किन्नको लागि तँछाड मँछाड गर्छन् ।”
महिलाका त्यस्ता कुरा सुनेर महाकवि कालीदासलाई अरु आश्चर्य लाग्यो “कस्तो अचम्म ! पैसा दिएर मान्छेले पाप किन्छन् ?”
महिलाले भनी, “हो महाराज मान्छेहरू पाप पैसाले किनेर लान्छन् ।”
कलिदास - “उसो भए यो माटोको भाँडोमा ती आठ वटा पाप कुन कुन हुन् ?”
महिला - “क्रोध, बुद्धिनाश, यशका नाश, स्त्री एबं वच्चाहरूका साथ अत्याचार र अन्याय, चोरी, असत्य, दुराचार, पुण्यका नाश र स्वास्थ्यको नाश । यी आठ प्रकारका पाप यो माटोको भाँडोमा छ ।”
कालीदासलाई झन् कौतुहल भयो, “यो त बडो विचित्रको कुरा भयो ।”
अहिलेसम्म उनले कुनै पनि शास्त्रमा पढेका थिएनन् । माटोको भाँडोमा आठ प्रकारका पाप हुन्छन् भनेर । उनले महिलासित सोधे, “आखिर यो माटोको भाँडोभित्र
के छ त्यस्तो ?”
महिलाले जवाफ दिई, “यो माटोको भाँडोमा रक्सी छ महाराज !”
कालीदासले महिलाको इमान्दारिता र सत्यतासँग प्रसन्न भएर भने, “तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ । रक्सीमा आठ प्रकारका पाप हुन्छन् भन्ने कुरा पनि तिमी जान्दछ्यौ । र म पाप बेच्छु भनी-भनी बेच्छ्यौ । तर पनि मान्छेहरूले तँछाड मँछाड गरेर पाप किनेर लान्छन् । धिक्कार छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई !”
अतिथि (not verified) — Sun, 02/24/2013 - 20:39
प्रसिद्ध साहित्यकार रवीन्द्रनाथ टैगोरले भनेका छन्, 'मातृभाषामा शिक्षा पाउनु मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार हो । हामी जसरी आमाको कोखमा जन्मेका हौं त्यसैगरी मातृभाषा पनि हाम्रो कोख हो । यी दुवै आमा हाम्रालागि सधैं सजीव र अपरिहार्य छन् ।' उनले मातृभाषाको महत्त्वलाई बुझे र बुझाउने कोसिस गरे । प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ नेलसन मण्डेलाले भनेका छन्- इफ यू स्पिक टु अ म्यान इन अ ल्याङ्वेज ही अन्डरस्ट्यान्डस, इट गोज् टु हिज माइन्ड बट इफ यू स्पिक इन हिज ल्याङ्वेज इट गोज टु हिज हर्ट । यदि कसैसँग उसले बुझ्ने भाषामा कुरा गर्नुभयो भने त्यो कुरा उसको दिमागमा मात्र पुग्छ । यदि उसको मातृभाषामा भन्नुभयो भने मुटुसम्म पुग्छ । मण्डेलाले मातृभाषाको द्रुत असरलाई प्रस्ट्याए ।.